Waqtiga Uu Eden Hazard Ciyaarayo Kulankiisii Ugu Horeysay Ee La Liga Oo La Ogaaday & Zidane Oo War Wanaagsan Ka Helay Xiddigihii Ka Dhaawacnaa - Gool24.Net
Waqtiga Uu Eden Hazard Ciyaarayo Kulankiisii Ugu Horeysay Ee La Liga Oo La Ogaaday & Zidane Oo War Wanaagsan Ka Helay Xiddigihii Ka Dhaawacnaa
Tababare Zinedine Zidane ayaa ugu danbeyn helay warkii uu sugayay tan iyo markii xilli ciyaareedkan uu bilowday markii lagu wargeliyay in Eden Hazard uu diyaar u yahay kulankiisii ugu horeysay ee La Liga.
Xiddigii hore ee Chelsea ayaa ciyaari doona kulanka ugu soo horeeya ee Real Madrid ay dheeleyso ka dib kulamada caalamiga ah ee ay la ciyaarayaan kooxda Levante.
Xiddiga reer Belgium ayaa laga saaray xulka Belgium ee isreebreebka Euro 2020 madaama uu la dhibtoonayay dhaawac muruqa bowdada oo soo gaaray xagaagii taasoo u diiday inuu u ciyaaro Madrid ka dib markii uu 100 milyan euro xagaagii uga soo wareegay Chelsea.
Haatan, Hazard ayaa markii ugu horeysay ka soo hor muuqan doona taageerayaasha Real Madrid kulanka ay Sabtida 14ka bisha September garoonka Bernabeu ku soo dhaweynayaan kooxda Levante.
Xilli ciyaareedkan si fiican uguma bilaabanin kooxda Madrid inkastoo uu Gareth bale uu dib u helay qaab ciyaareedkiisa ka dib markii uu u muuqday inuu baxayo xagaagii.
Kooxda Zidane ayaa ku jirta kaalinta shanaad ee kala sareynta horyaalka La Liga ka dib markii ay hal kulan badiyeen islamarkaana barbaro galeen labada kulan kale seddexdii kulan ee la ciyaaray xilli ciyaareedka La Liga, waxaana dhibaato ku ahaa liiska dhaawacyada oo dheeraa.
Si kastaba Brahim Diaz iyo James Rodriguez ayaa dib ugu soo laabtay kooxda iyagoo ka qeyb qaatay shalay oo Jimce aheyd tababarka waxaana ay diyaar u yihiin inay ciyaaraan kulanka Levante.
Isco iyo Marco Asensio ayaa iyaga weli dhaawac ku maqan iyadoo Asensio la filayo inuu xilli ciyaareedkan oo dhan garoomada ka maqnaado ka dib dhaawac halis ah oo Mareykanka ku soo gaaray.